Ny tanàna 5 mora indrindra any Etazonia | Vaovao momba ny dia
Maria Jose Roldan | | America, Etazonia
Betsaka ny olona manalavitra ny fandehanana any Etazonia satria mieritreritra izy ireo fa ho lafo be ilay dia, na tsy hahatratra ny teti-bola hahafinaritra ny zava-drehetra. Angamba ianao olona maniry ny hanao dia lavitra miaraka amina kitapo ary euro vitsivitsy ao am-paosinao, amin'ity tranga ity, ho anao ity lahatsoratra ity.
Betsaka ny tanàna any Etazonia azonao tsidihina sy mahafinaritra na dia manana teti-bola voafetra aza ianao. Mora ny fitaterana ary afaka mahita hetsika mora vidy na maimaimpoana natao ho an'ny mpitsidika manokana aza ianao noho izany dia mety satria tsy mila mandany kely na tsy mahaliana ianao amin'ny fialan-tsasatrao any amin'ireo tanàna any Etazonia ireo.
Ka raha mieritreritra ny ho any Amerika Avaratra ianao hahita ny zava-mahatalanjona azy ary hametraha fanandramana hampianatra an'izao tontolo izao fa azo atao ny mandeha nefa tsy mandany vola be loatra, dia tohizo hatrany ny famakiana satria te hahalala ireo tanàna ... mandray an-tsoratra!
Azo antoka fa rehefa mamaky ny an'ity tanàna ity ianao dia misy sary mihetsika tena malaza ataon'ny mpilalao sarimihetsika Tom Hanks tonga ao an-tsaina, fa ankoatr'izay dia hanomboka ho tonga ao an-tsaina koa izy io satria tanàna afaka mitondra anao betsaka izy nefa tsy mila mandany vola be loatra.
Napetrako amin'ny lisitra avo indrindra ity tanàna ity satria tanàna lehibe hitsidihana vola kely ary any Filadelfia afaka manao zavatra maro maimaim-poana. Ireo tranonkala mahaliana ara-tantara dia tsy andoavam-bola. Toa tsy mampino izany satria ho zatra miaina amin'ny firenena izay saika miampanga anao noho ny fifohana rivotra ianao, fa amin'ity tranga ity dia afaka mankafy ireto toerana mahaliana ara-tantara ireto ianao toy ny:
Ny lakolosy liberty
Ny lapan'ny fahaleovan-tena
Banky voalohany any Amerika
Ny tempolin'ny mason
Museum momba ny zavakanto
The Museum Edgar Allan Poe
Lava sns ...
Ho fanampin'izay, raha tsy ampy izany, dia afaka mahita toerana hatoriana toy ny trano fandraisam-bahiny sy hotely amin'ny vidiny mirary indrindra miaraka amin'ny fitaovana maro.
Las Vegas dia tsy ny toerana hanambadian'ny olona mariazy hankalaza fampakaram-bady tsy mampino - toa efa lasa mahazatra io - fa koa paradisa ho an'ireo tsy manam-bola izany. Betsaka ny olona mieritreritra fa raha mankany Vegas izy ireo amin'ny vola kely dia hivoaka amin'izany izy ireo amin'ny fisaorana betsaka noho ireo trano filokana sy trano filokana misy ao. Fa ny zava-misy dia ny filokana dia tsy safidy tsara hahazoana vola azo antoka, ka raha manana teti-bola ambany ianao dia tsara kokoa ny tsy manakaiky ny trano filokana satria mety ho lany na inona na inona ianao.
Saingy any Las Vegas ianao dia afaka mahita fifanarahana trano fandraisam-bahiny maro, sakafo mora vidy ary hetsika mora vidy na amin'ny teti-bola voafetra.. Tanàna tsy matory mihitsy izy, ary mirehitra foana ny jiro ary afaka mankafy hatrany ny dia an-tongotra amin'ny vidiny mirary toa ny:
Ny gondola an'ny Venetian
Ny lapan'ny fanatanjahantena
Ny Aquarium Silverton sira rano
Ny loharano sôkôla ao Bellagio
Ny filokana miaraka amin'ny filokana isan'andro - fa tsarovy izay nolazaiko teo amin'ireo andalana etsy ambony.
Raha tianao ny tantara dia mety aminao ity toerana ity satria iray amin'ireo toerana manan-tantara hitsidika azy io. Ny ankamaroan'ny tranombakoka any Washington DC Manana fidirana maimaimpoana izy ireo hahafahanao mankafy ny famirapiratany rehetra nefa tsy mila mamoaka ny poketranao.
Ohatra iray amin'ny tranombakoka maimaim-poana:
Fahatsiarovana an'i Vietnam
Ny Arboretum Nasionaly
Ny tranombakoka an-dranomasina
Anisan'ny maro hafa izay hahatonga ny fitsidihanao ho sarobidy.
Ho fanampin'izay, toy ny hoe tsy ampy izany, amin'ny fahavaratra dia matetika ny kaonseritra sy ny hetsika an-kalamanjana izay malalaka ihany koa. Eto amin'ity tanàna ity, azo antoka ny fahafinaretana nefa tsy mila mandany vola, inona no mbola angatahinao?
Amin'ny toerana fahefatra dia afaka mahita ny tanànan'i Baltimore isika. Ity tanàna ity dia manana tantara maro ary mamela anao hahafantatra azy maimaim-poana koa hanitatra ny fahalalanao ary hanakaiky kokoa ny fahafantarana ny tanàna vangianao.
Ho fanampin'izany, afaka mahita hetsika maimaim-poana toy ny:
Miakatra ny tsangambato Washington
Tsidiho ny Tumbra an'i Edgar Allan Poe
Tsidiho ny Fort Mchenry
Mandehandeha mamaky ilay Italiana kely mahafinaritra - izay ho tianao, eny an-dalana-.
Tsy lainga izany raha milaza aminao aho fa tsy iray amin'ireo tanàna malaza indrindra amin'ny fizahan-tany any Etazonia ny Orlando, fa kosa ho an'ny fizahan-tany any ivelany. Betsaka ny mpizaha tany liana te hahalala an'ity tanàna ity izay feno fahagagana ho an'ireo mpitsidika azy. Ankoatr'izay, tanàna mora vidy izy ka tsy mila manoritra paosy be loatra ianao mba hankafizanao izay rehetra miandry anao.
Na dia marina aza fa raha mankany Disney ianao na Universal malaza dia tsy toerana mora vidy izy ireo, misy zavatra hafa mora vidy hafa azonao atao mba hankafizanao ny vakansinao mora vidy any Orlando. Mila ohatra vitsivitsy ve ianao mba hankafizanao ny tanàna mora vidy? Tanjona:
Mandehandeha eny amoron-tsiraka tsara tarehy any Orlando
Tsidiho ny Foibe Imagination Lego
Mandehana any amin'ny Museum an'i Ripley
Tsidiho ny Science Center
Fantaro ny Museum of the Train and trolleybuses
Araka ny hitanao, misy drafitra maro azonao atao ao amin'ireo tanàna dimy mahafinaritra ireo izay hitanao any Etazonia. Noho io antony io, raha te-hankany Amerika Avaratra ianao nefa te-hanao teti-bola, misafidiana iray -na maromaro amin'ireo tanàna nolazaiko mba ho mora ny fialan-tsasatrao, ankoatry ny lafatra.
Raha manapa-kevitra ny hitsidika ireo tanàna ireo amin'ny teti-bola ianao, dia aza misalasala milaza aminay ny zavatra niainanao ary lazao anay hoe iza no toerana mora indrindra ary iza amin'ireo no tena tianao indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Etazonia » Ny tanàna 5 mora indrindra any Etazonia
Tsara, ity fotsiny no notadiaviko. Ny marina dia ho antsika izay te-hahita zavatra be dia be amin'ny vola kely dia volamena ireo zavatra ireo.